Soo degso Waqooyiga Ameerika B-25J RAF MkII FSX & P3D - Rikoooo
downloads 6 535
Naqshaddii hore ee diyaaradda oo ay sameeyeen Brian Withers iyo Roy Chaffin, U beddelasho FSX Qaabka waddaniga ah ee Bluebear
Diyaaradaha quruxda badan ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee loo yaqaan duulimaadkooda Tokyo. Tan add-on waxaa loo sameeyay FS2004 waxaana sameeyay Brian Withers iyo Roy Chaffin markaa waxaa loo rogay wadan ahaan FSX Waxaa soo saaray Bluebear (oo aan uga mahadcelineyno gudbinta), natiijada: qurux add-on waayo, Prepar3D v4 iyo FSX dadka kale. Waxaa ka mid ah toddobo dib-u-hagaajin tayo leh, dhawaaqyo asal ah, iskuday macmal ah oo leh cabbirro macquul ah iyo sawir-gacmeedyo, liis warbixineed iyo tixraacyo.
Waqooyiga Ameerikaanka B-25 Mitchell waa weerarka dhexe ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Xirfaddiisa waxa ay ku bilaabmaysaa ficil aad u wanaagsan (weeraro ka dhacay Tokyo). Waxaa lagu magacaabaa sharaf ka mid ah duulimaadyada milatari iyo taliyaha ciidamada Maraykanka ee Faransiiska intii lagu jiray dagaalkii 1steerka Adduunka, General William Billy Mitchell. (Wikipedia)
Qore: Naqshadeynta diyaaradeed ee asalka ah waxaa sameeyay Brian Withers iyo Roy Chaffin, U beddelashada FSX Qaabka waddaniga ah ee Bluebear
Fokker D.21 Xidhmada v2.0 FSX & P3D 2